मान्छेहरु जति सुकै ठुलो भए पनि आफुले सानो उमेरमा गरेको हरकतहरु कहिले पनि बिर्सन सक्दैन । हुन त शायद जो कोही पनि सानोमा केटाकेटी अवस्थामा अलि चुलबुले, उटपट्याङ गर्ने खालको, चकचके अनि काम मात्रा बिगार्ने किसिमको मात्र हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो ब्यक्तिगत अनुभवमा । म पनि सानो छदा त्यस्तै नै थिए । चकचके, काम बिगार्ने, गुच्चा खेल्ने, खोपी खेल्ने यस्तै थिए म पनि सानोमा । काम बिगार्ने, गुच्चा खेल्ने, खोपी खेल्ने, सलाइको खोल जम्मा गरी त्यसैको तास खेल्ने यस्तो काममा धेरै नै अगाडि थिए, बरु म खाना खाने काम छोड्थे । शायद केटाकेटीको दिमाग अलि परिपक्व नहुनाले पनि जस्तो लाग्छ अहिले मलाई । जति काम बिगारे पनि, जती गाली खाए पनि, बाबु आमाको जति कुटाइ खाए पनि कहिले चेत आउने थिएन । त्यस्तो हुँदा एक छिन् सम्म चुप लागेर बस्यो अनि केही बेर पछि फेरि त्यही काम कृयामा लाग्यो । तर एक दिन मेरो चकचकको पनि हद नै भयो । गाइघाट बजारमा नै दाहुर साहुको घर थियो । अहिले त निकै मजाले सजिएको छ यो घर, तर आज भन्दा १२-१३ साल अघि त्यो घर एउटा खन्डहर जस्तो थियो । अगाडि पट्टी मात्र हेर्न लायकको थियो, तर पछाडि त हेर्न नै सकिने थिएन । त्यो घरको पछाडि एउटा बयरको रुख थियो । त्यहा बयर पनि लटरम्म फलेको हुन्थ्यो । बयरको रुख नजिकै टासिएको घरमा खागको (माहुरीको एक प्रकार) गोलो थियो । खाग बिच्किन्छ र हामीलाई टोक्ने छ भन्ने डर पनि लाग्दैन थियो । बिना डर हामी बयरको रुखमा चडी बयर टिप्थ्यौ ।
This entry was posted on आइतवार, जुन 14th, 2009 at 11:5 and is filed under "सस्मरण".	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
“खागले टोकेको दिन” का2वटा प्रतिक्रियाहरु
manju भन्नुहुन्छ:	जुन 14, 2009 मा 11:5	HA HA HA HA BRO SARAI HASE,DHANNA HOSPITAL LANU PARENA CHHA,YASTAI HO NI HAI BALYAKAAL BHANEKO, RAMRO CHHA
जवाफ फर्काउनुहोस् sud भन्नुहुन्छ:	जुलाई 24, 2009 मा 11:5	ohi yo khag ho ki kag ho yadi khag nai ho bhane khag bhaneko k ho